Netflix si ay ula shaqeeyaan David Benioff iyo Dan Weiss si loo abuuro taxane cusub - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Netflix si ay uga wada shaqeeyaan David Benioff iyo Dan Weiss abuuritaanka taxane cusub
Abuurayaasha filimka taxanaha TV-ga ah ee carshiga HBO waxay ku biiraan masraxa US Netflix ee ka dhanka ah 200 milyan.
In kasta oo la soo gabagabeeyey muran ku saabsan la qabsiga taxanaha tillaabada tooska ah ee sheekada 'Game The Thrones', ama carshiga birta, David Benioff (25th Hour, Magaalada tuugada, X-ragga asal ahaan: Wolverine, Troy) iyo Dan Weiss (Ciyaaraha Fiidiyowga, Halo, Ciyaarta 'Ender', Waxaan ahay Legend, Waxay Ku Noolyihiin) wali waxay u baahan yihiin shirkado badan oo taxanaha ah iyo warshadaha filimka. Haddii qorayaasha qorayaasha Mareykanka ay hada diirada saaraan qoritaanka sheeko cusub ee Star Wars ee Disney, Netflix si lama filaan ah waxay u soo bandhigtay adeegyadoodii wax aan ka yarayn 200 milyan oo doolar oo leh qandaraas gaar ah oo dhawr sano ah.
David Benioff iyo Dan Weiss waxay yimaadeen Netflix
Haatan oo ku xiran Netflix, labada nin waa inay quudiyaan buugga macluumaadka adeegga caanka ah ee fiidiyaha-dalbashada leh taxane asal ah oo awood u leh inay la tartamaan kuwa Disney + iyo Apple TV +. Bandhigayaasha David Benioff iyo Dan Weiss ayaa iska cad inay ku faraxsanyihiin tartankan cusub:Waxaan la soo barbardhignay HBO weyn toban sano ka badan waana u mahadcelinaynaa qof kasta oo halkaas jooga. Bilihii ugu dambeeyay, waxaan qaadnay saacado badan inaan la hadalno Cindy Holland iyo Peter Friedlander, iyo sidoo kale Ted Sarandos iyo Scott Stuber. Waxaan wadaagnaa xasuus la mid ah filimada 1980, waxaan jecel nahay isla buugaagta waana ku faraxsanahay fursadaha sheeko isku mid ah. Netflix waxay dhistay wax la yaab leh oo aan horay u dhicin, waxaana sharaf noo ah in lagu casuumay inaan ku biiro iyaga."
Maaha in la sheego in Netflix ay la wadaagto xamaasad la mid ah tii Ted Sarandos, agaasime ka kooban, wuxuu sharxayaa: "Waxaan ku faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno sheekooyinka waaweyn ee David Benioff iyo Dan Weiss ee Netflix. Iyagu waa xoog hal abuur leh oo cajiib ah waxayna dhagaystayaal adduunka oo dhami ku leeyihiin sheekooyinkooda xiisaha badan. Waxaan sugeynaa inaan aragno waxa khayaali ah ay u keeni doonaan macaamiisheena."
Wareysiga David Benioff iyo Dan Weiss intii lagu jiray showga Jimmy Kimmel Live!
Dolemite waa Magacaygu: Eddie Murphy sida sawirka bulsheedka Blazploitation ee Netflix
Boqortooyada: taariikhda la sii daayo xilliga 3
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/netflix-va-collaborer-avec-david-benioff-et-dan-weiss-pour-la-creation-de-nouvelles-series-325195